Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Na-ahazi nzere bachelorette ma ọ bụ nzere bachelọ bụ n'ezie akụkụ kachasị mma nke ịbụ ezigbo nwoke ma ọ bụ nwanyị na-asọpụrụ nsọpụrụ. Kedu ihe nwere ike ịbụ ihe obi ụtọ karịa ijikọta ndị otu niile maka ajọ ihe ọjọọ na Europe? Karịsịa tupu ndị nwere ihu ọma na otu ahụ…
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Omiiko njem mara na ọ dị mkpa na-enwe ezi njegasi. Na a ọma lee anya na map, a siri ike atụmatụ nke njem, na ọtụtụ ihe, ebube na-eme - na ị na-setịpụụrụ gị 10 ụbọchị Switzerland njem. Na mgbe ị na-eme njem site Europe, a…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji E nwere ọtụtụ ihe nke oké nkiri na Europe. Adrenaline achọ na ndị hụrụ oké egwuregwu nwere ike na-enweta dị iche iche na European ebe na a dịgasị iche iche nke omume. Ọ bụrụ na ị na-eche otú iji nweta n'ebe ụgbọ okporo ígwè, anyị ị kpuchie, oke! Ebe a na-anyị n'elu…